Ɔdwe​—Ebɛn Kwan Do Na Ɔboa Hɛn?
Ɔweɔn-Aban—Dza Adzesua Nsɛm Wɔ Mu | May 2020
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo Efik English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexico Mmum Kasa Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigeria Mmum Kasa Niuean Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Panama Mmum Kasa Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South Africa Mmum Kasa Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuela Mmum Kasa Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba (Alata) Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Akataasia bi a wɔfrɛ no Sara * kãa dɛ: “Meyɛ nyimpa a mefɛr adze na minnyi ahotodo kɛse wɔ mo mu. Dɛm ntsi sɛ menye nyimpa a hɔn enyi yɛ dzen na wɔwɔ ahotodo wɔ hɔnho mu hyia a, m’ahom nnka moho koraa. Naaso sɛ menye obi a ɔdwe na ɔbrɛ noho adze hyia a, nna moho atɔ me. Mutum nye nyimpa a ɔtse dɛm no kasa, mekã dɛ mbrɛ metse nka ho asɛm kyerɛ no na menye no bɔ me haw ho nkɔmbɔ. M’anyɛnkofo a wɔdwe na wɔbrɛ hɔnho adze no, hɔn na mebɛn hɔn papaapa.”
Nsɛm a Sara kãe no ma yehu dɛ, sɛ yɛdwe a, afofor pɛ hɛn asɛm. Ɔdwe yɛ su a ɔsɔ Jehovah n’enyi. N’Asɛm no tu hɛn fo dɛ: ‘Yɛnhyɛ ɔdwe.’ (Col. 3:12) Ebɛnadze nye ɔdwe? Ebɛn kwan do na Jesus daa no edzi dɛ ɔdwe? Afei, ebɛn kwan do na dɛm su yi botum ama yeenya enyigye wɔ hɛn asetsena mu?
EBƐNADZE NYE ƆDWE?
Sɛ yɛyɛ nkorɔfo a yɛpɛ asomdwee a, ɔkyerɛ dɛ yɛdwe. Obi a ɔdwe no, ɔnye nkorɔfo dzi no wɔ abotar na ayamuyie mu, na ɔhyɛ noho do ber mpo a asɛm a ɔyɛ ebufuw esi no.
Sɛ obi dwe a, ɔnnkyerɛ dɛ ɔyɛ mberɛw, na mbom ɔyɛ dzen ankasa. Greek kasafua a wɔdze gyina hɔ ma “ɔdwe” wɔ Bible mu no, nna wɔdze dzi dwuma dze kyerɛ pɔnkɔ a n’enyi yɛ dzen naaso wɔatsetse no ma n’enyi aba famu. Iyi nnkyerɛ dɛ pɔnkɔ no n’ahoɔdzen efi no mu, na mbom dza ɔkyerɛ nye dɛ, wɔatsetse pɔnkɔ no ma ɔmmfa n’ahoɔdzen no nnyɛ adze gyangyan. Dɛmara so na sɛ yɛda ɔdwe edzi a, ɔkyerɛ dɛ yɛhyɛ hɛnho do ama yɛnye afofor aatsena asomdwee mu.
Bi a yɛbɛkã dɛ, ‘Emidze mennyɛ nyimpa a modwe.’ Ɔyɛ nokwar, yɛtse wiadze a enyiɔdzen na ebufuw ahyɛ mu mã mu, ntsi obotum ayɛ dzen ama hɛn dɛ yɛbɛda ɔdwe edzi. (Rom. 7:19) Dɛm ntsi, ohia dɛ yɛyer hɛnho ama yeetum ada ɔdwe edzi. Naaso Jehovah no sunsum krɔnkrɔn no bɔboa hɛn ma yaayer hɛnho ada ɔdwe edzi. (Gal. 5:22, 23) Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ yɛyer hɛnho dɛ yɛbɛda ɔdwe edzi?
Ɔdwe yɛ su a ɔma afofor pɛ hɛn asɛm. Dɛ mbrɛ Sara a yɛakã noho asɛm no kãe no, sɛ yɛnye nyimpa a wɔdwe bɔ a ɔma hɛnho tɔ hɛn. Nyia ɔyɛɛ ɔdwe na ayamuyie ho nhwɛdo kɛse nye Jesus. (2 Cor. 10:1) Nna mbofra a wonnyim no mpo pɛ dɛ wɔbɛn no.​—Mark 10:13-16.
Sɛ yɛda ɔdwe edzi a, ɔboa hɛnankasa nye hɔn a wɔbɛn hɛn. Sɛ yɛdwe a, nsɛm rennhaw hɛn ntsɛntsɛm anaa yɛrennyɛ hɛn adze ebufuw do. (Mbɛ. 16:32) Ɔno ntsi, ɔremma yɛnnyɛ ndzɛmba a obepira obi, nkanka obi a yɛdɔ no papaapa na ekyir yi yeennu hɛnho. Afei so, sɛ yɛdwe a, afofor nya do mfaso osiandɛ sɛ yɛhyɛ hɛnho do a, yɛrennyɛ ndzɛmba a ɔbɛhaw hɔn.
ƆDWE HO NHWƐDO A ƆKYƐN BIARA
Ɔmmfa ho dɛ nna Jesus nnyi adagyer na asodzi pii gu no do no, ɔdaa ɔdwe edzi kyerɛɛ nyimpa nyinara. Nna nyimpa piinara a wɔwɔ n’aber do no ruhu amandze na wɔasoa hɔn ndzesoa a no mu yɛ dur. Ɔno ntsi nna wohia ahomgye. Hwɛ awerɛkyekyer ara a wonyae ber a Jesus kãa kyerɛɛ hɔn dɛ: “Hom mbra mo hɔ, . . . osiandɛ modwe na mebrɛ moho adze wɔ akoma mu” no!​—Matt. 11:28, 29.
Ɔdwe a Jesus daa no edzi no, ebɛn kwan do na hɛn so yebotum ada bi edzi? Ɔsɛ dɛ yesũa Nyankopɔn n’Asɛm no, ama yeehu kwan a Jesus faa do nye nyimpa dzii nsɛm nye dɛ mbrɛ odzii tsebea a ɔyɛ dzen ho dwuma. Sɛ yɛyɛ dɛm a, ɔnodze, sɛ tsebea bi sɔ ɔdwe a yɛwɔ no hwɛ a, yɛbɔbɔ mbɔdzen esũasua Jesus. (1 Pet. 2:21) Hom mma yensusu ndzɛmba ebiasa bi a ɔboaa Jesus ma ɔdaa ɔdwe edzi no ho.
Nna Jesus brɛ noho adze wɔ akoma mu. Jesus kãa dɛ, ‘ɔdwe na ɔbrɛ noho adze wɔ akoma mu.’ (Matt. 11:29) Bible no kã dɛm su ebien yi ho asɛm bɔ mu osiandɛ ɔdwe nye ahobrɛadze wɔ ebusuabɔ kɛse. (Eph. 4:1-3) Ebɛnadze ntsi na yɛkã no dɛm?
Ahobrɛadze boa hɛn ma yemmbu hɛnho nntra do anaa yɛmma nsɛm nnhaw hɛn ntsɛntsɛm. Hɔn a wɔkãa Jesus noho asɛmbɔn dɛ ɔyɛ “nyimpa tumfur” na “nsahweam” no, ebɛn kwan do na Jesus nye hɔn dzii nsɛm? Jesus dze ne ndzeyɛɛ daa no edzi dɛ dɛm asɛm no nnyɛ nokwar, na ofi ɔdwe mu kãa dɛ, “nyansa no ndwuma bu no bem.”​—Matt. 11:19.
Sɛ obi kã asɛm a ɔyɛ ebufuw fa ebusua a ifi mu, wo bɔbea, anaa beebi a ifi ho a, ebɛnadze ntsi na emmbɔ mbɔdzen ennda ɔdwe edzi? Peter yɛ asafo mu panyin a ofi South Africa. Ɔkãa dɛ: “Sɛ obi kã asɛm ma ɔhyɛ me ebufuw a mibisa moho dɛ, ‘Sɛ ɔyɛ Jesus a, nkyɛ ebɛnadze na ɔbɛyɛ?’” Ɔkãa so dɛ: “Mebohu dɛ ɔnnsɛ dɛ mubu moho dodoodow.”
Nna Jesus nyim dɛ nyimpa nndzi mũ. Nna Jesus n’esuafo no wɔ ɔpɛ dɛ wɔbɛyɛ dza ɔtsen, naaso osiandɛ nna wonndzi mũ ntsi, ɔtɔ da a nna ɔyɛ dzen ma hɔn dɛ wɔbɛyɛ dza ɔtsen. Nhwɛdo bi nye yi. Anafua a adze rebɛkye ma Jesus ewu no, ɔkãa kyerɛɛ Peter, James, na John dɛ wɔnye no nweɔn, naaso woenntum annye no annweɔn, mbom wɔdedae. Jesus kãa asɛm bi dze kyerɛɛ dɛ ɔtse siantsir a wɔdedae no ase. Ɔkãa dɛ: ‘Sunsum pɛ dze, na honam yɛ mberɛw.’ (Matt. 26:40, 41) Osiandɛ nna Jesus nyim dɛ n’asomafo no nndzi mũ ntsi, ɔamma no bo emmfuw hɔn.
Mandy yɛ akyerɛbaa bi a nna dza afofor bɛyɛ biara onya ho asɛm kã, naaso seseiara dze ɔbɔ mbɔdzen dɛ obosũasua ɔdwe ho nhwɛdo a Jesus daa no edzi no. Ɔkãa dɛ, “Mobɔ mbɔdzen dɛ mebɛgye ato mu dɛ nyimpa biara nndzi mũ, ntsi tse dɛ Jehovah no medze m’adwen si su pa ahorow a wɔwɔ no do.” Jesus daa tsema edzi na iyi maa ɔnye nyimpa a wonndzi mũ dzii no wɔ ɔdwe mu. Ana ibosũasua Jesus na eenya tsema ama afofor osian hɔn sintɔ ntsi, na enye hɔn eedzi no ɔdwe mu anaa?
Jesus gyaa biribiara hyɛɛ Nyankopɔn nsa. Ber a Jesus wɔ asaase do no, nkorɔfo nye no enndzi no yie naaso ogyinaa ano. Nkorɔfo anntse no ase, wobuu no enyimtsia na wɔyɛɛ no ayakayakadze. Ne nyinara ekyir no, ɔkɔr do daa ɔdwe edzi osiandɛ “ɔdze noho hyɛɛ nyia obua atsɛn tsenenee no nsa.” (1 Pet. 2:23) Nna Jesus nyim dɛ no sor Egya no bɔboa no ma ɔaakɔ do egyina n’emudzi mu, na ber a ɔsɛ mu no ɔaatwe hɔn a wobuu no atsɛnkyew no aso.
Sɛ afofor nye hɛn enndzi no yie ma ntsi hɛn bo fuw a, annhwɛ yɛbɛyɛ ndzɛmba bi dze aasɛɛ asɛm no koraa. Iyi ntsi na Kyerɛwnsɛm no tu hɛn fo dɛ: “Nyimpa ebufuw nnyɛ Nyankopɔn tsenenee ho edwuma.” (Jas. 1:20) Sɛ mpo hɛn asɛm yɛ dɛw a, sintɔ ntsi annhwɛ a yɛbɛyɛ hɛn adze wɔ kwan a ɔmmfata do.
Akyerɛbaa bi wɔ Germany a wɔfrɛ no Cathy. Nna ɔtaa kã dɛ, ‘Sɛ warankasa annkõ wo kõ a, obiara ronnkõ mma wo.’ Naaso ber a onyaa Jehovah no mu ahotodo no, no suban sesaa koraa. Ɔkãa dɛ: “Seseiara dze, mehu dɛ no ho nnhia dɛ mobɔkõ ama moho. Iyi ntsi mutum mifi ɔdwe mu gyaa nsɛm mu ma ɔka, osiandɛ minyim dɛ Jehovah nankasa bedzi dza ɔnnyɛ biara ho dwuma.” Sɛ woebu wo atsɛnkyew a, nhwɛdo a Jesus yɛe a ɔnye dɛ ɔdze noho too Nyankopɔn do no bɔboa wo ma aakɔ do ada ɔdwe edzi.
“NHYIRA AKÃ ABRƐFO” ANAA HƆN A WƆDWE
Ebɛn kwan do na ɔdwe bɔboa hɛn wɔ tsebea a no mu yɛ dzen mu?
Jesus maa ɔdaa edzi dɛ sɛ yɛpɛ dɛ yenya enyigye wɔ hɛn asetsena mu a, ɔsɛ dɛ yɛda ɔdwe edzi. Ɔkãa dɛ: “Nhyira akã abrɛfo,” kyerɛ dɛ, hɔn a wɔdwe. (Matt. 5:5) Hom mma yɛnhwɛ mbrɛ ɔdwe si boa hɛn wɔ tsebea ahorow yi mu.
Sɛ asomdwee nnyi awar mu a, ɔdwe boa ma asomdwee ba. Onua bi a wɔfrɛ no Robert a ofi Australia kãa dɛ: “Makekã nsɛm a ɔyɛ yaw pii akyerɛ me yer a nkyɛ ɔnnsɛ dɛ mekã. Naaso sɛ ekekã ebufusɛm a ɔtsetse dɛm wie a, irunntum nntwe nnsan. Sɛ muhu dɛ asɛm a mekãe no ahaw no a ɔyɛ me yaw papaapa.”
‘Hɛn nyina yɛfom mpɛn pii’ wɔ kasa mu, dɛm ntsi nsɛm a ɔyɛ yaw a yɛkekã no botum asɛɛ asomdwee a ɔwɔ awar mu. (Jas. 3:2) Wɔ tsebea a ɔtsetse dɛm mu no, ɔdwe boa hɛn ma yɛkɔ do hyɛ hɛnho do na yɛhwɛ nsɛm a yɛkã no yie.​—Mbɛ. 17:27.
Robert bɔɔ mbɔdzen dɛ ɔbɛda abotar na ahohyɛdo edzi. Ebɛnadze na efi mbɔdzen a ɔrobɔ no mu aba? Ɔkãa dɛ: “Ndaansa yi, sɛ akasakasa bi soɛr a, mobɔ mbɔdzen dɛ mibetsie me yer yie, menye no bɛkasa ɔdwe mu, na mennkɛma mo bo efuw. Seseiara dze muhu dɛ menye me yer ntamu ebusuabɔ no mu ayɛ dzen papaapa.”
Ɔdwe boa hɛn ma yɛnye afofor ntamu yɛ kama. Hɔn a ɔnnkyɛr na hɔn bo efuw no, wɔtaa hwer hɔn anyɛnkofo. Naaso ɔdwe boa hɛn ma ‘yekura asomdwee ahoma mu.’ (Eph. 4:2, 3) Cathy a yeedzi kan akã noho asɛm no kãa dɛ, “Ɔwɔ mu dɛ nyimpa binom wɔ hɔ a ɔyɛ dzen dɛ enye hɔn bɔbɔ, naaso ɔdwe boa me ma menye nyimpa ahorow nyina bɔ kama.”
Ɔdwe dze akomatɔyamu ba. Bible no ma yehu ebusuabɔ a ɔda “nyansa a ofi sor no” nye ɔdwe na asomdwee ntamu. (Jas. 3:13, 17) Obi a ɔda ɔdwe edzi no wɔ “akoma pa.” (Mbɛ. 14:30) Martin yɛ obi a ɔabɔ mbɔdzen enya ɔdwe suban. Ɔkãa dɛ: “Nkan no, dza mepɛ no nna dɛmara na mepɛ dɛ afofor yɛ, naaso seseiara dze mennyɛ m’adze dɛm, na iyi ama menya enyigye na akomatɔyamu.”
Nokwasɛm nye dɛ, ɔsɛ dɛ hɛn nyinara yɛyer hɛnho papaapa dɛ yɛbɛda ɔdwe edzi. Onua kor kãa dɛ: “Nokwasɛm nye dɛ, ndɛ na ndɛ nyina, ɔtɔ da a mo bo tum fuw araa ma munnhu mbrɛ menyɛ moho.” Naaso Jehovah a ɔhyɛ hɛn nkuran dɛ yɛnda ɔdwe edzi no, bɔboa hɛn wɔ dɛm ɔkõ yi mu. (Isa. 41:10; 1 Tim. 6:11) Jehovah botum ‘ayɛ hɛn mũ’ na obotum ‘ahyɛ hɛn dzen.’ (1 Pet. 5:10) Tse dɛ Paul no, mber rokɔ do no, yebotum esũasua “Christ no dwe nye ne tsema” no.​—2 Cor. 10:1.
^ nky. 2 Wɔasesa edzin ahorow no bi.
Fa mona Fa mona Ɔdwe​—Ebɛn Kwan Do Na Ɔboa Hɛn?
w20 May nkr. 17-19
‘Etsifi Afamu Hen No’ Wɔ Ewiei Mber Yi Mu
Ahemfo Beenu A Wɔnye Hɔnho Dzi Esi Wɔ Ewiei Mber Yi Mu
Ndɛ, Woana Nye ‘Etsifi Afamu Hen No’?
Akyɛdze A Nyankopɔn Dze Ama Wo No, Ana Ekyerɛ Ho Enyisɔ?
Ma Ɔnda Edzi Dɛ W’enyi Sɔ Jehovah N’akyɛdze A Yɛmmfa Hɛn Enyi Nnhu No
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU May 2020
Fa mona Fa mona ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU May 2020
ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU May 2020
Ahohyɛdo​—No Ho Hia Ama Yeenya Jehovah N’enyimpa